ကြှနျုပျတို့အကွောငျး - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homerayhab - မီးရထားသတင်းနှင့်လေလံပွဲကြှနျုပျတို့အကွောငျး
7 နှစ်ပေါင်းမပြတ်မတောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသတင်းသတင်းစာပညာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းရထားလမ်း, ကားလမ်းနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကို rayhab ဖြစ်ပါသည် ရည်ရွယ်ချက်သတင်းစာပညာ၏နားလည်မှုနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ထုတ်လွှင့်ဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်လက်မှတ် 65 တထောင်သတင်း assign ။ rayhab ဖြစ်ပါသည် ရထားလမ်းမော်ကွန်းတိုက်၏ 65 နှစ်ပေါင်းနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏က်ဘ်ဆိုက် 20 တထောင်သတင်းစာစောင်များနှင့်နေ့စဉ်လေလံပေါ်သတင်းအပြင်ကျနော်တို့ပျမ်းမျှ 60 တထောင်ထူးခြားတဲ့ဧည့်သည်တစ်ဦးတစ်နေ့လျှင်ကြိုဆိုဂုဏ်ယူကြသည်။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: ဇူလိုင်လ 1 2008 ရထားလတ်ြလပ်ခ / Liberty ကျွန်ုပ်တို့၏ညာကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲအခမ်းအနားရထားများအတွက်ကျင်းပခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ် 01 / 07 / 2013 ယနေ့တွင်ဇူလိုင်လ 1 1873 ပရိယာယ်-Varna ရထားလမ်း Baron Hirsch ကတူရကီရဲ့ဥရောပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမီးရထားကုမ္ပဏီအတွက်သမိုင်းချေးငွေအတွက်။ Bulgurlu-Ulukışla (xnumxkm) လိုင်းအတွက်ဇူလိုင်လ 1 1911 Anatolia-ဘဂ္ဂဒက်မီးရထားဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကြေးနန်းဝါယာကြိုးများ၏ 38 1 ကီလိုမီတာဇူလိုင်လ 1917 Mayen အတွက်ဖြတ်ခဲ့7ကြေးနန်းထမ်းဘိုးတို့ကိုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်နှစ်ခုတံတားများဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။ ဒါဟာဇူလိုင်လ71 Bolkus-Filyos လိုင်းဖွင့်လှစ်။ ဇူလိုင်လ 1930 1 Fevzipaşa-line ကို Diyarbakir နျဌာနခှဲလိုင်းဘူတာရုံထဲမှာကွဲကွာYolçatı Elazig ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Fevzipaşa-Diyarbakir ရထားလမ်း 1934 ။ ဘူတာကနေကီလိုမီတာ / Yolçatıအဆိုပါ 344 24 ကီလိုမီတာလိုင်းသြဂုတ်လ xnumx't အခမ်းအနားများတွင်စစ်ဆင်ရေးထဲသို့သွင်းထားခဲ့ပါတယ်ကတည်းက။ ဇူလိုင်လ 11 1934 Toprakkale-Payas နှင့်Fevzipaşa-Meydanıekbazလိုင်းပြည်သူပိုင်နှင့်စစ်ဆင်ရေးထဲသို့သွင်းထားခဲ့ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ 1 ...
HGS အမှား drivers တွေကိုဒေါသထွက် 17 / 04 / 2013 hgs '' ကားပိုင်ရှင်တစ်ဦးခက်ခဲအနေအထားအမှားသန်းပေါင်းများစွာအတွက်လူတန်းစားကွဲပြားမှုထွက်ခွာမည်။ www.sikayetvar.com မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များထံသို့စေလွှတ်တိုင်ကြားချက်အရ, တံဆိပ်ပေါ်မှာအတန်း tool ကိုအချို့သောအခြားသူများကိုကွဲပြားခြားနားသောအကူးအပြောင်းအတန်းကြောင့် HGS တှငျနထေိုငျအမြန်နှုန်းခြားနားချက်ချိုးဖောက်မှုမှမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်ကိုအသုံးပြုဖို့နေစဉ်။ အဆိုပါအာဏာပိုင်များ, "အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖြစ်နိုင်ပါတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ HGS အမှားတွေအဆုံးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လူတန်းစား HGS အကြွင်းမဲ့အာဏာ tool ကိုနေချိန်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်မှတ်တမ်းတင်ထားသောသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ယာဉ်ရဲ့အတန်းအစားယာဉ်လူတန်းစားအပေါ် tag ကိုအသုံးပြုခဲ့, နေ့ပြစ်ဒဏ်များကိုယူပြီး၏အမှု၌ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်၎င်း tag ကိုလျှောက်ထားခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ပြဿနာပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်သေဆုံးသူအခကြေးငွေအဖြစ်လူတန်းစားကွဲပြားမှုအရသိရသည်ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။ အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်တိုင်ကြားမှုများအပေါ် ...
3 ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sine qua လေဆိပ် 14 / 11 / 2014 ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေဆိပ်၏ sine qua မဟုတ်တဲ့: Elven ဝန်ကြီးများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေး3။ လေဆိပ် ''3နှင့်စပ်လျဉ်း။ လေဆိပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ တိုင်းတူရကီနိုင်ငံသားဂုဏ်ယူဖြစ်ခြင်းနှင့်ဂုဏ်ပြုသင့်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။ လုပ်ဖွင့်ပွဲတွင်လည်းပြည်နယ်လေဆိပ်အာဏာပိုင်အထွေထွေမန်နေဂျာ Orhan Birdal နှင့်သင်၏မှ General Manager Temel Kotil အတွက် Ataturk လေဆိပ်ခါးစညျးရှေ့ဖုံးခရီးသည်၌ဤဧရိယာ Lutfi Elvan အထူးသဖြင့်3ကနေပထမဦးဆုံးကိုယျတျော၏ဂျီနီဗာအထွက်လေကြောင်းနှုတ်ဆက်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ "တူရကီအတွက်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ၏ကြီးထွားမှုနှုန်းကို double-ဂဏန်းကိန်းဂဏန်းများအတွက်: သူ replied အဖြစ်လေဆိပ်နှင့် ပတ်သက်. ဂျာနယ်လစ်များကမေးသော်မေးခွန်းများကို။ အကယ်. ငါတို့ရှိသမျှသည်လေ့လာမှုများနှင့်အချက်အလက်ကြောင်းကျနော်တို့ကဒီတိုးတက်မှုနှုန်းကိုဆက်လက်ဦးမည်ဟုပြော ...
Metrobus အစ္စတန်ဘူလ်ကြော်ငြာမတ်တပ်ရပ်ဒေါသထွက် 26 / 04 / 2012 Huddle İETTဗလာ Metrobus ကြော်ငြာရုပ်ရှင်ပြသသောကလစ်နိုင်ငံသားများအနေဖြင့်အလွန်ခိုင်ခံ့သောတုံ့ပြန်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ social media Kadir ဗလာmetrobüslပြိုလဲတုံ့ပြန်မှာဖျောပွထားပါ။ အတည်မပြုရသေးသောခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်ကြော်ငြာရုပ်ရှင်။ အမိမြေအလွတ် Metrobus သရုပ်ဆောင် infallible နှင့်ငါ့အကိုကလစ်နှိပ်ပါကြော်ငြာပြအတူပြည့်ကျပ်နေအောင်ထည့်ကစားသမားလူမှုမီဒီယာများတွင်အထူးသဖြင့်ရေနံတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Kadir Topbas, ကြော်ငြာမှာပြထားတဲ့အတိုင်းမနေ့ကတုံ့ပြန်မှုချည်းမက "သင်တန်း၏သတင်းအကဲဖြတ်ဖို့။ တစ်ဦးအချည်းနှီးသော Metrobus ကြော်ငြာသဘောသဘာဝအတွက်လေ့လာမှုမှာပစ်ခတ်ရှိသည်မယ်လို့ဆိုလိုသည်မှာ။ ငါအနည်းငယ်ပိုပြင်းထန်သောဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့သညျငါ့ကို script ကိုပြသကြလိမ့်မယ်နဲ့တူ။ အနည်းငယ်ပိုပြီးငါထိုသို့ပြုနိုင်ကြောင်း ...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောသို့မဟုတ်ခရီးသည်အပေါ်သယ်ဆောင်, ဒါမှမဟုတ်အမြန်ရထား 09 / 03 / 2013 ကျနော်တို့မနေ့က ifm ... ကျနော်တို့ကုန်စည်ပြပွဲ Center မှာဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်ပထမဦးစွာအစ္စတန်ဘူလ် ... သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Binali Yildirim နှင့်ပြည်နယ်မီးရထားအထွေထွေဒါရိုက်တာSüleyman Karaman အတူခဲ့ကြသည်နီးပါး "တနေ့လုံး" မနေ့ကအမြန်ရထားသို့မဟုတ်ကျနော်တို့ရဲ့ကျောအပေါ်ခရီးသည်သယ်ဆောင်သို့မဟုတ်; "ဥရောပအာရှရထား-3 မီးရထားအလင်းရထားအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတရားမျှတသော" ... ပြပွဲအတူတကွသူကို "ဥရောပဧည့်သည်များ" la Binali Yildirim ၏အဖွင့်၌ရှိ၏ တူရကီမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း 10 "ရထားလမ်း" 25 ဤကိန်းဂဏန်းကိုတက်စေတဲ့ "ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ 2023 ဘီလီယံကိုပေါင်" "45 ဘီလီယံကိုပေါင်," na သို့မဟုတ်သူရကပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူကဖော်ပြထားခြင်း; တစ်ဦးကလည်းတွေ့ရှိရ "ပို့ပေးပါ" ။ ဟုသူကပြောသည်; "10 ကိုယ်စားတှငျ။ တစ်နှစ်တာနိုင်ငံတော်သီချင်းနောက်ပိုင်းနှစ်များတွင်ရေးထားလျက်ရှိ၏ရေးစပ်နှင့်ကဏ္ဍအမည်ဖြင့်သီဆို ...
Kadikoy Kartal မက်ထရိုပေါက်ကြားရေ 15 / 03 / 2013 Topbas "ဟုအဆိုပါသမ္မတနိုင်ငံအကြီးမားဆုံးမြေအောက် '' Kadikoy Kartal မက်ထရိုယိုစိမ့်ကဆိုသည်။ Kadir Topbas, ပေါက်ကြားနေသည် Kadikoy-Kartal မက်ထရိုဘူတာရုံထဲမှာကုန်ဆုံး7နှစ်ပေါင်းထံမှရသောရေထဲမှာ "သမ္မတနိုင်ငံအကြီးဆုံးမက်ထရိုလိုင်းများ၏သမိုင်း" ။ Kadir Topbas, ပေါက်ကြားနေသည် Kadikoy-Kartal မက်ထရိုဘူတာရုံထဲမှာကုန်ဆုံး7နှစ်ပေါင်းထံမှရသောရေထဲမှာ "သမ္မတနိုင်ငံအကြီးဆုံးမက်ထရိုလိုင်းများ၏သမိုင်း" ။ သူဟာဥမင်လိုဏ်ခေါင်းထဲဝငျဖို့ဝံ့ပေသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Kadir Topbas အချောကုန်ပစ္စည်းများဂုဏ်ကျေးဇူးနှင့်3ဘီလီယံကိုသီခငျြးဆိုပါမဟုတ်နိုင် Kadikoy-Kartal မက်ထရိုအတွက်သြဂုတ်လ 17 2012 အတွက်ပေါင်ဝန်ဆောင်မှုဝင်ကြ၏။ 8 ထက်မီထရိုဘူတာ။ သူကလပြီးပါကရှေ့တော်၌ထိုအပျက်အယွင်းသို့ပြန်သွား၏။ Topbas "ရထားလမ်းဘူတာနှင့်3ဘီလီယံခန့်အပါအဝင် Wagon, ...
အစာရှောင်ခြင်းရထားအကြီးအကဲတွေအီတလီစာရေးဆရာကအလွန်အမျက်ထွက်ခဲ့ကြသည် 11 / 09 / 2013 Ltf ကုမ္ပဏီအမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အစိုးရရှေ့နေ၏ရုံးခန်း, စီမံကိန်းအီတလီမှာရှိတဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိနျးအတှကျထောကျပံ့လိုက်လျောခဲ့ပါဘူးဘို့, အီတလီစာရေးဆရာ Erri De Lucas အနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်တာဝန်ရှိသည်ရာ: အစာရှောင်ရထားသူဌေးကအလွန်အမျက် ထွက်. အီတလီစာရေးဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။ အီတလီနိုင်ငံရဲ့တူရင်-လိုင်ယွန် high-speed ကိုရထားစီမံကိန်းအားဝေဖန်သောမြေပေါ်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမြို့များကိုတို့အကြားလုပ်, စီမံကိန်းကိုတာဝန်ရှိသည် Ltf ကုမ္ပဏီ, အီတလီရဲ့ဆုရစာရေးဆရာ Erri က de Lucas အနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကဏ္ဍများအတွက် Piemonte ရှုရှန်ချိုင့်, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဒေသခံစီးပွားရေးကိုရည်ညွှန်းကြောင့်နှစ်ပေါင်းရုန်းကန်နေ, မြန်ရထားလူ့ကျန်းမာရေးအတိုက်အခံထိခိုက်စေလိမ့်မယ်ဟုဆိုကာ။ တူရင်ဆန္ဒပြသူတွေအတွက်အစိုးရရှေ့နေရုံးအတွင်းအဘယ်သူမျှမ TAV လှုပ်ရှားမှု "အကြမ်းဖက်သမားများ" ကြေငြာ ...
အစ္စတန်ဘူလ်မြေအောက်ရေယိုစိမ့် 19 / 11 / 2013 အစ္စတန်ဘူလ်မြေအောက်ရေယိုစိမ့်: Kadikoy-Kartal မြေအောက်ရထားအချို့အတွက်ခရီးသည်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတွင်တွေ့မြင်အစိုဓာတ်ကိုအစွန်းအထင်းနိုင်ငံသားများအနှောက်အယှက်ကိုရပ်တန့်။ သတင်း Vatan သြဂုတ်လ 1732012 ကုန်စည်ဘီလီယံကိုပေါင်အဆိုအရနှင့်ရုပ်ပုံများကိုရပ်တန့်ဖို့ဝန်ဆောင်မှုသို့မှန်ဘီလူးကနေ 16 22 ကီလိုမီတာအတွင်းဖြစ်ပေါ်သော Kadikoy-Kartal မက်ထရိုဘူတာရုံထဲမှာ Kozyatagi အစ္စတန်ဘူလ်တွင်နေထိုင်သူများအတွက်ထင်ဟပ်အာရုံကြောဖြစ်ကြသည်။ ခရီးသည်အသုံးပြုတဲ့ဘိလပ်မြေလမ်းလျှောက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုအဘို့ကိုစကျင်ကျောက်များနှင့်အင်္ဂတေနုနှင့်အတူမဖုံးမကျြစိကိုမလွတ်။ သူတို့သုံးပြီးမသက်မသာဖြစ်ကြပါလျှင် Metro နံရံပေါ်မှအစိုဓာတ်ကိုအစွန်းအထင်းဖော်ပြ။ အဆိုပါသမ္မတနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမက်ထရိုလိုင်းများ၏သမိုင်းအဖြစ်တည်ဆောက်ထားခြင်းနှင့်, Kadikoy-Kartal မက်ထရို7နှစ်ပေါင်း 40 မီတာအရပျကိုလက်စသတ် ...
TCDD စွပ်စွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက် (ဗီဒီယို) မှ Marmaray ရေပေါက်ကြားခဲ့ဘူး 20 / 11 / 2013 ယနေ့တွင် (နိုဝင်ဘာလ 19 2013) Marmaray 10 အချို့အင်တာနက်ဆိုဒ်များ: Marmaray ရေစွပ်စွဲသတင်းစာဖြန့်ချိဖို့ပေါက်ကြား TCDD ကိုပြု၏။ နှင့် 13 ။ အဖြစ်အစိတ်အပိုင်းမှရေယိုစိမ့်တည်ရှိပြီးသောစွပ်စွဲချက်နှင့်စပ်လျဉ်း။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သမ္မတနိုင်ငံ (TCDD), အ Marmaray ရေက Unreal ခဲ့ကြောင်းစွပ်စွဲချက်ပေါက်ကြားပါကစနစ်အတွက်မဆိုရေယိုစိမ့်မရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုထံမှစာဖြင့်ရေးသားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာတော့ယနေ့ Marmaray 10 အချို့အင်တာနက်ဆိုဒ်များ။ နှင့် 13 ။ သတိပေး segments များမှရေယိုစိမ့်သောကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်စွပ်စွဲချက်လက်တွေ့ကြောင်းဖော်ပြထားခဲ့စွပ်စွဲချက်အဘယ်မှာရှိပါသညျ။ Marmaray တစ်အစိတ်အပိုင်းအမှတ် 13 ဆိုရှိကွောငျးဖော်ပြချက်မှတ်စုတွင်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ် ...
TCDD Eskişehirသတင်းအခြေအမြစ်မရှိမှောင်မိုက်ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်ဖြစ်ပါသည် 05 / 01 / 2014 TCDD: asılsızdır.türkiသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတော်မီးရထား၏သတင်း (TCDD) "TCDD Eskişehirဟာအမှောင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်", "Eskisehir TCDD သည်မှောင်မိုက်၌သင်္ဂြိုဟ်လေ၏" အမည်ရအစီရင်ခံစာအခြေအမြစ်မရှိကပြောပါတယ်။ "TCDD ဘူတာတံတားဟာဖြိုဖျက် Osmangazi လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူး Co. , မတိုင်မီ: TCDD ဖွငျ့ရေးသားထားသောကြေညာချက်ထဲမှာ, အဖြစ်အပျက်များ၏အမှန်တရားပြောဖို့သွား Eskisehir မန်နေဂျာသက်ဆိုင်ရာကြိုးတွေလွှဲပြောင်းမှုအတွက်အစီရင်ခံခဲ့သည်။ 10 လျှပ်စစ်ကေဘယ်လ်ပေါ်မှာတရားဝင်စာဖြင့်ရေးသားအစီရင်ခံစာ၏စက်တင်ဘာလ 2013 ရွှေ့ပြောင်းခံရမေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။ Osmangazi လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူး Co. , ပြည်နယ်စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှု 18 စက်တင်ဘာလ 2013 တံတား၏ဖြိုဖျက်မစတင်မီ cable ရဲ့တစ်ဦးသောအဘို့ကို cancel ဖို့ပါတီများအားဖြင့်အရေးအသား, ရက်စွဲပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖှဲ့အစညျး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ရွှေ့ပြောင်းခံရဖြစ်လိမ့်မည်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: ဇူလိုင်လ 1 2008 ရထားလတ်ြလပ်ခ / Liberty ကျွန်ုပ်တို့၏ညာကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲအခမ်းအနားရထားများအတွက်ကျင်းပခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်
HGS အမှား drivers တွေကိုဒေါသထွက်
3 ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sine qua လေဆိပ်
Kadikoy Kartal မက်ထရိုပေါက်ကြားရေ
TCDD စွပ်စွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက် (ဗီဒီယို) မှ Marmaray ရေပေါက်ကြားခဲ့ဘူး